Poostaroota hololaa warraaqsa Ruusiyaa10 - BBC News Afaan Oromoo
Poostaroota hololaa warraaqsa Ruusiyaa10
Barri 1917 warraaqsa Ruusiyaa keessatti yeroo jeequmsaa isa guddicha yoo ta’eyyuu, yeroo kalaqaas tureera. Kanas warraaqsa poostaroota siyaasaa waggoota keessatti sabi bal’aan akka socha'uuf taasifame keessatti hubachuun ni danda'ama. Alexaandar Semyonoovaa Sagantaa BBC Ruusiyaa irraa Veeraa Panfiloovaa Daarektara giddu galeessa Muziyeemii seenaa Ruusiyaa ammayyaa gaafachuun poostaroota 10 adda baaseera.
Madda suuraa, sovrhistory.ru
''Liqaa bilisummaa'' - Fakkii loltuu beekamaan Booriis Kustoodiyee qawwe qabate kunis, yaalii Ruusiyaa waraana adduunyaa tokkoffaaf taasiftuu maallaqa akka kennanniif kan gaafatuudha. Poostariin kunis Guraandhala 1017 keessa liiqaa beeksiisuufi kan hojatame fi fakkiin loltuu kun hanga ji'a Onkoloolessaatti beeksisa hundumaa irratti bahaa kan tureera.
Guyyoota warraaqsaa - Bitooteessa 1917 waltajiin Voskreeseenskaayaa fi gamoon paarlaamaa magaalaa Mooskoo lafa hiriirri waraaqsaa itti geggeefamuturan. 'Poostariin haala taatee ture agarsiisu' kunis hawwii fi abdii namoonni bara sanatti waraaqsaaf qaban kan muli'suudha. Kun hunduu kan godhamaa ture osuma waraanni geggeefamaa jiruuti.
Hoggantoota - Kun dhugumatti poostarii miti. Kun barruulee aangoon Ruusiyaa keesssa namootatti akka itti fakkefaman agarsiisudha. Namoonni kunneenis namoota siyaasaa beekamoo bara sana keessa turanii dha - Mikaheel Rodzi'aankoo miseensa mootummaa kutaa biyyaafi Dura taa'aa Duumaa kan giddu jirudha. Mootummaa Soshaalistummaan jalqabaa fi gara fulduraa kan hoganu, Aleksaandir Kereenskiy, gara bitaatiin gajallaa golee irratti kan gaafatama. Gararraatti ammoo hidhatoota dhaadannoo: ''lafaa fi bilisummaa'' fi ''waraana qofaan mirga kee argachuu dandeessa'' kan jedhu baatanii kan jiran wayita ta'u yeroof Bolisheviiks as irra hinjiru.
Qilleensa jijjiramaa - Kun kan dhufe mana maxxansaa warra gara bitaa Paaruus waraaqsaan dura barreessaa Maaksiim Gookyiin kan hundeefameedha. Poostarooti kunneenis yeroo baay'ee kan hojjetaman waloo fi artiistiitoota beekamoo kan akka Vlaadimiir Mayaakovsky fi Aleseey Raadakoovin ture. Fakkiin jalqabaa kan agarsiisuu sirna burjaa sana wayita ta'u barreefamni ibsa kanaas ''looltuun kun kana eegu warra kana ture''. Fakkiin lamaafaan immo erga waraaqsi gaggeefameen booda wayita ta'u, dhaadannoo ''lafaafi bilisummaa!, ''Demokraasii fi Riipablikii'' akkasumas ''walabummaa'' kan jedhu ture. Barreefamni jalaas ''Innis kan har'aa ittisuudha!'' jedha.
Biiftuu Baatuu - Bitootessa 1917 keessa, Tsaar Niikolaas II aangoo isaa irraa bu'famuun mootummaan kutaa biyyaa dhaabbate. Poostariin kunis ''Yaadannoo mo'icha uummataa'' jedhamuun moggaafame. Fakkiin kunis Tsaar moggaafamuun aangoo isaa warraa humna waraaqtotaa loltuu fi hojjetaa hidhanno qabaniin fakkeefamaniitti dabarsee wayita laatu kan agarsiisu dha. Duuba isaaniittin kan mul'atu mana mootummaa Taawuridee bakka itti aanoon mootummaa Duumaa itti walgahaniidha. Isa gararaatti kan mul'atu immo biiftuu bahaa jirtudha: mallattoo bilisummaati. Poostarota yeroo sanaa keessatti mallattoon kun dedeebii'e kan mul'ataa tureedha.
Piraamidii hawaasummaa - kunis walta'insa biraa kan Maayakoovski-Radookoov Paaruusf godheedha. Fakkiin kunis ifa gochuudhaan Tsaariin kan kaa'ee wayita ta'u shorshorri ufata isaatis karaa lamaan achi gad dheerachuun namoota isa jala jiran hunda kan uffisu ta'udha. Irra hanga jalaatti: ''Isiin irratti moona. Isiniif kadhanna. Isiin irratti murteesina. Isin eegna. Isin nyaachifna. Isin immoo ni hojjettu.''Seenaa oftulummaan hanga birraa bara 1917 turee kunis farra sirna mootii fi amantii kan ta'ee fi keessattu Tsaar Nikoolaas fi haadha manaa isaa irratti kan xiyyeefatu ture.
Yeroo duula dadamaqsuu -Arfaassaa bara 1917 keessa, Ruusiyaan duula filannoo isa jalqabaa eegalte. Duulli filannoo kunis baay'ee dubbiin kan guutee fi kallatti tokko qofa irratti kan geggefamu ture. Poostarii kana irratti kan barrefamees; ''Jallewwan lammii biyyaa! guyyaa walgahiin bu'uraa itti banamurra hiriiraa gochuuf of qopheessaa!'' kan jedhu ture.
''Seeramaleessummaan dimokiraasiin injifatama'' - Poostarrii fakkii bineensootaa fi seenaa afaanii irraa qophaa'ee kun lenjitootaan hojjetame - bineensi guddichi kan lootu fakkatu kan diddaa ykn seera malleessummaa kan bakka bu'u yoo ta'u, loltuun farda adii irra jiru immoo dimokiraasii bakka bu'a.
Cancalicha kukutuu - Poostariin Paartii Warraaqsa Soshalistichaas hojjettootaa fi qote bulaa irratti kan xiyyeefateedha. ''Paartiin Warraaqsa Soshialistii - mirga kee kan argatu karaa waraanaa qofa!'' jedha. Duula baayyee qindaawaa qodhan. Mo'ichas kan argachu danda'an dhadannoo ''Lafaa fi bilisummaa!'' akkasumas ''Cancalicha kukutuun addunyaan hundi bilisummaa argata'' kan jedhuun ture.
Paarticha yeroo itti darbeera - Partiin Bolsheviik (RSDLP) tapha postarii kanaaf kan boodatti hafe ture. Poostariin duula filannoo bara 1917: ''paartii RSDLP tiif sagalee kennaa'' kan jedhu qofa ture. Sadaasa bara 1917 wayita wal waraansi biyya keessatti jalqabetti yeruma sana qabaman. Mayaakovskii fi Raadakoov kan dabalate gartuun artistoota Soviyet beekama sumudakan kan Oknaa ROSTA (fooddaa ROSTA) jedhamu uuman. Poostariin kunis ergaan isaa gabaabaa fi ifaa ture. Innis guutu biyya Soviyeet keessatti isa booda idla adduunyaa irratti mallattoo hololaa isa beekama ta'e.